ဇူလိုငျ 1, 2020 – Healthy Life Journal
———၊ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန် ၊——– Q. အံဆုံးပေါက်နေချိန်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာတချို့က ခံစားရပြီး တချို့က ဘာမှမခံစားရပါဘူး ဆရာ။ နာကျင်မှုဝေဒနာ သက်သာစေဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ Lattlatt (FB) A. အံဆုံးပေါက်ချိန်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာ ခံစားရတာဟာ...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကွန်ပျူတာရှေ့ အထိုင်များ၊ ကွန်ပျုတာအကြည့်များတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ မျက်စိကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါသလဲရှင့်။ Hlanwe(FB) A. မျက်စိက တစ်နေရာတည်းမှာ ကြာကြာကြည့်ပြီး အာရုံစိုက်ထားရင် မျက်စိရဲ့သူငယ်အိမ်ကို ထိန်းထားတဲ့...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မေမေ့မှာ ဆီးချိုရောဂါ ရှိပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုး လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ်။ NoeNoe(FB) A. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ကြွက်သားတွေကို လှုပ်ရှားစေတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်သွေးလှည့်ပတ်မှု မြန်ဆန်စေတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်က...
ဖုန်းသုံးရာက ဇက်ကြောထိုး၊ ဇက်ကြောတက်ဖြစ်ခြင်း
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. အခုတလော ဖုန်းအသုံးများလို့လားမသိဘူး၊ ဇက်ကြောတွေ တက်နေလို့ပါ။ ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ။ KoThant(FB) A. ဖုန်းပွတ်တဲ့သူတွေက ခေါင်းကိုငုံ့ပြီး ဖုန်းပွတ်တဲ့အတွက် ဇက်ကြောထိုး၊ ဇက်ကြောတက်တယ်ဆိုပြီး ဆရာတို့ဆီလာပြတဲ့ လူနာတွေ...
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ မျက်တောင်တွေ ပါးလာတာ ပုံမှန်ပဲလား
———၊ လရိပ်မေ ၊——— မျက်တောင်တွေ ပါးလာတာက အိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာချိန်မှာ သင့်မျက်တောင်တွေက အရင်လို ထူထဲရှည်လျားမှု မရှိတော့ဘူးဆိုရင် စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါက သဘာဝပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်တောင်ကြီးထွားမှုမှာ အဆင့်လေးဆင့် ရှိပါတယ်။ ကြီးထွားတဲ့အဆင့်၊ နားနေတဲ့အဆင့်၊...